बिहानको ०९ : ३८
news24nepal.tv . ११ महीना अघि
काठमाडौँ । नेप्से २ दशमलव २३ अंकले घटेर १ हजार २ सय ५८ दशमलव ६६ को बिन्दुमा पुगेर कारोबार बन्द भएको छ । यसदिन १ सय ७७ कम्पनीको १२ लाख २६ हजार ६८६ कित्ता शेयर खरिदबिक्री भई ३५ करोड ९४ लाख ११ हजार रु...
सुन प्रतितोला ६३ हजार रुपैयाँमा कारोबार
सुन आज प्रतितोला ६३ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। अघिल्लो दिन प्रतितोला ६३ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन आज १०० रुपैयाँ घटेको नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासैघले जनाएको छ। चाँदीको मूल्य भ...
मंगलवार नेप्से कारोबारको एक घण्टामा स्थिर (१२ बजेको अपडेट)
abhiyan.com.np . ११ महीना अघि
असार ३, काठमाडौं (अस) । मंगलवार नेप्से कारोबार भएको एक घण्टाको अवधिमा शून्य दशमलव १६ अंकले घटेर १ हजार २६० दशमलव ७३ विन्दुमा आइपुगेको छ । १ हजार २६१ दशमलव शून्य ५ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक १५ मिन...
पाँचतारे हायात होटल बन्द भएको भन्दै नेप्सेलाई पत्र
२ असार, काठमाडौं । हायात होटलका कर्मचारीहरु सेवा–सुविधा कटौतीको विरोधमा केही दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । तर, कर्मचारीहरुको माग सम्वोधन गर्नुको साटो व्यवस्थापनले होटल नै बन्द भएको भन्दै नेपाल स्टक एक्सच...
शेयर कारोबार सुस्ताउन थाल्यो, बन्द भएको हायातको शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण
bizmandu.com . ११ महीना अघि
काठमाडौं। पछिल्लो दिनमा शेयर बजार सुस्ताउन थालेको छ। दिनदिनै बजारमा गिरावट आउन थालेपछि कारोबार रकम खुम्चिन थालेको हो। मंगलबार नेप्से सूचक २.१० अंकले गिरावट हुँदा कारोबार रकम पनि ३५ करोड ३७ लाख रु...
लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था : कम्पनी विश्लेषण (मंगलवार, ३ असार २०७६)
लक्ष्मी लघुवित्त कम्पनी लक्ष्मी बैंकको सहायक कम्पनीले हो । यस कम्पनीमा लक्ष्मी बैंकको ७० प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ भने ३० प्रतिशत सर्वसाधारण शेयर स्वामित्व छ । चालू आवको चैत मसान्तसम्म कम्पनीले रू. ...
असार ३, काठमाडौं (अस) । नेप्से कारोबार भएको दोस्रो घण्टामा १ दशमलव ५५ अंकले बढेर १ हजार २६२ दशमलव ४५ विन्दुमा पुगेको छ । १ हजार २६१ दशमलव शून्य ५ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक डेढ घण्टामा १ हजार २६३ ...
मजदूर आन्दोलनका कारण हायात होटेल बन्द
काठमाडौं । सरकारी जग्गा र तारागाउँ विकास समितिको शेयर स्वामित्वसम्बन्धी विवादमा तानिएको काठमाडौंको पाँचतारे होटेल हायात रिजेन्सी अहिले मजदूर आन्दोलनका कारण बन्द भएको छ । दैनिक अक्युपेन्सी करीब ७० प...
गोर्खाज फाइनान्स : कम्पनी विश्लेषण (मंगलवार, ३ असार २०७६)
तेस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले रू. ६ करोड ३५ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १२ गुणा बढी हो । सो अवधिमा कम्पनीले रू. ५१ लाख ६ हजार नाफा कमाएको थियो । चालू आवको तेस्रो त्रैमास...
काठमाडौं (अस) । भारतीय इस्कर्टस कम्पनीको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता द हबी अटो ट्रेडिङ प्रालिले एक्सट्रिम ब्याकहो लोडर सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त उपक...
छ्याङ्दी हाइड्रोपावर कम्पनी : कम्पनी विश्लेषण (मंगलवार, ३ असार २०७६)
कम्पनीले चालू आवको चैत मसान्तसम्ममा ७१ लाख ३८ हजार नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ४४ प्रतिशत बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले रू. ४९ लाख २६ हजार नाफा कमाएको थियो । चैत मसा...